“Waxaan Ku Qanciyay Messi Inuu Sii Joogo Barcelona Laba Xilli Ciyaareed Kahor” – Gool FM
(Barcelona) 04 May 2018. Luis Suarez ayaa u sheegay “Mundo Deportivo” ee gobolka Catalonia kadib markii uu qarsan kari waayay, sida uu u caawiyay Lionel Messi laba xili ciyaareed kahor, kadib markii uu ku dhawaaday inuu ka dhaqaaqo kooxda Barcelona.
“Marka uu Messi doonay inuu ka tago kooxda Barcelona sanadii 2016, waxaan u sharaxay xaqiiqda, ma uusan ku farxi lahayn koox kale, sida uu haatan ugu faraxsan yahay Barcelona, guulal badan ma uusan ku gaari lahayn koox kale, sidaas darteed wuxuu go’aansaday inuu iska joogo”.
“Uma arko isaga Messi, wuxuu in badan ka duwan yahay bini’aadamka, carruurteena iyo haweenkeena waa saaxiibo. Way adagtahay in la helo saaxib ka mid ah kubada cagta, gaar ahaan marka aad isku boos ka ciyaareysaan, Messi wuxuu iga caawiyay inaan ku guuleysto kabaha dahabka, isla markaana aanigana waa inaan wax sameeyaa”.
Luis Suarez ayaa sidoo kale ka hadlay bixitaanka Neymar Jr: “Waxay ahayd Xaalad aad u xanuun badan, wuxuu ahaa saaxib aad u wanaagsan,waxaan u maleynayaa inuu ugu dhaqaaqay PSG sababa la xidhiidha arimo dhaqaale, laakiin waxa uu leeyahay ujeedooyin kale oo uu doonayo inuu gaaro”.